Waxaan nahay shaqadii Eebbe, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Sannad cusub ayaa ka bilaabmaysa dunidan dhibaataysan iyadoo aan sii wadno socdaalkayaga cajiibka ah ee sii dheeraada oo u sii gala boqortooyada Ilaah! Sida Bawlos u qoray, Ilaah wuxuu inaga dhigay muwaadiniin boqortooyadiisa markii uu "inaga badbaadiyey xoogga gudcurka oo uu inagu riday boqortooyada wiilka uu jecel yahay meesha aan ku haysanno badbaadada, taas oo ah cafiska dembiyada" (Kolosay 1,13-14).
Sababtoo ah xuquuqdeena madaniga ah ayaa jannada ku jira (Filiboy 3,20), waxaa waajib naga saaran yahay inaan Ilaah u adeegno, inaan noqonno gacmihiisa iyo hubkiisa adduunka, oo aan deriskeenna u jeclaano sida nafteenna oo kale, maxaa yeelay innagu waxaynu nahay kuwa Masiixa ah ee ma nihin annaguba amma adduunka ina hareereeyey. hareeraha, yaynaan inaga adkaan xumaanta, laakiin waa inaan sharka ku guuleysanno wanaag (Rooma 12,21). Ilaah wuxuu leeyahay sheegashada koowaad annaga, aasaaska sheegashadduna waa inuu isagu si xor ah ula heshiisiiyay oo uu noogu jeclaaday oo uu furtay markii aan weli kujiraan addoonsiga rajo la'aan.
Waxaa laga yaabaa inaad maqashay sheekada ku saabsan ninkii dhintay, ka dibna toosay oo arkay isagoo taagan Ciise hortiisa, oo ku hor yaal albaab weyn oo dahab ah oo leh calaamad ay ku qoran tahay: "Boqortooyada jannada". Ciise wuxuu ku yidhi, Waxaad u baahan tahay hal milyan oo jannada geli. Ii sheeg dhammaan wixii wanaagsan oo aad sameysay oo aan markaa xisaabtaada ku dari karno - markii aan helno milyan dhibco ayaan furaynaa albaabka waanan kuu oggolaanayaa. ”
Ninkii wuxuu yidhi: Fiican, aan aragno. Waxaan guursaday isla naagtan 50 sano waligeyna maan khiyaameyn ama been uma sheegin. Waxaad heleysaa seddex dhibcood. "Ninkii wuxuu yiri:" Seddex dhibcood oo keliya? Ka waran jiritaankayga qumman ee adeegyada iyo toban meelaadkayga qumman? Ka waran sadaqada iyo wasaaradayda? Maxaan ku helayaa waxan oo dhan? Ciise intuu eegay miiskiisii ​​dhibco ayuu yidhi: “Taasi waa 28 dhibcood. Taasi waxay kuu keentaa 31 dhibcood. Kaliya waxaad u baahan tahay 999.969 dheeraad ah. Maxaa kale oo aad sameysay Ninkii wuu argagaxay. Wuxuu ku qayliyay oo yidhi: "Tani waa tan ugu fiican ee aan haysto. Weligey ma sameyn doono! ”Ayuu jilbihiisa u dhacay oo qayliyey:“ Sayidow, ii naxariiso! ”Ayuu yidhi Ciise. "Hal milyan oo dhibcood. Soo gal!
Tani waa sheeko layaableh oo muujineysa run iyo yaab yaab leh. Siduu Bawlos ku qoray Kolosay 1,12:2,1, waa Ilaah “kan ina hagaajiyey inaan dhaxal u helno kuwa quduusiinta nuurka ku jira”. Waxaan nahay abuurkii Eebbe, ee nala heshiiyey oo lagu soo furtay Masiixa, maxaa yeelay Ilaah baa na jecel! Mid ka mid ah Qorniinka aan jeclahay waa Efesos 10. U fiirso ereyada si geesinimo leh:
"Adiguna waad ku dhinteen xadgudubyadiinnii iyo dembiyadiinnii ... Innaga dhexdooda ayaynu mar qudha ku dhex noolaan jirnay damac jidhkeenna ah, oo waxaan ku samayn jirnay doonistii jidhka iyo caqli ahaan, annaguna waxaad ahayd carruur xanaaq badan dabiicadda iyo weliba kuwa kaleba. Laakiin Ilaaha naxariista hodanka ka ahu badan yahay, oo jacaylkiisa weyn ee uu ina jecel yahay, weliba wuxuu inaga yeelay kuwa dembiyadeenii kula dhintay Masiix aawadiis, inaad badbaadisay; oo wuxuu inagula sara kiciyey jannada xagga Masiix xagga Ciise Masiix, in wakhtiyada soo socda uu muujiyo hodantinimada nimcadiisa ee xaggiisa wanaagsan xagga Ciise Masiix. Waayo, nimcadiinna waxaa laydinka badbaadiyey rumaysad, mana aha xagga xaggiinna, waa hadiyadda Ilaah, ee ma aha xagga shuqullada, si aan ninna ugu faanin. Maxaa yeelay, innagu waxaynu nahay shaqadiisii, oo ku dhex uumay Ciise Masiix shuqullada wanaagsan ee Ilaah hore ugu diyaariyey inaynu ku dhex soconno. "
Maxaa dhiirigelin kara? Badbaadadeenu kuma xirna annaga - waxay ku tiirsan tahay Ilaah. Maadaama uu aad noo jecel yahay, Masiixa wuxuu ku sameeyay wax walba oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo. Waxaan nahay abuurkiisa cusub (2 Korintos 5,17; Gal. 6,15). Waxaan sameyn karnaa shaqooyin wanaagsan maxaa yeelay Ilaah wuxuu inaga xoreeyay silsiladaha dembiga oo nafsad ahaanteenuu na siiyay. Waxaan nahay wixii Eebbe ina abuuray inaynu qabno, isaguna wuxuu ina amraa inay runtii ahaadaan waxa aynu nahay - abuurkii cusub ee uu inaga sameeyay Masiixa.
Waa maxay rajo yaab leh iyo waxa aan dareemeynaa nabad aan u soo bandhigi karno sanadka cusub, xitaa xilliyada dhexe ee dhibaatooyinka iyo qatarta badan! Mustaqbalkeenu wuxuu iska leh Masiix!